!! Indlwane eqaqambileyo nenesitayile eLa Marsa Beach !!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMehdi
Indlu ye-100m2 ibekwe entliziyweni yeMarsa Beach kunye neZephyr Mall, i-2 mins yokuhamba umgama ukusuka elunxwemeni. Ikufutshane nazo zonke izinto eziluncedo kwaye ifikeleleka kakhulu ngezithuthi zikawonke-wonke kunye neeteksi. Le ndlu inegumbi lokuhlala, amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elinye.
Indlu ikumgangatho woku-1. Inesantya esiphezulu se-intanethi kwaye ine:
-Igumbi lokuhlala elikhulu eline:
. ITV enkulu / iNetflix / inkqubo yesandi
. Indawo yokutyela yabantu aba-4
-Igumbi lokulala elikhulu eline:
. Ibhedi ephindwe kabini
-Igumbi lokulala lesibini eline:
- Igumbi lokuhlambela elinebhafu
- Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle kakhulu
Le ndlu ibekwe eLa Marsa Beach eTunis, awunakufumana indawo engcono xa undwendwela iTunisia.
Umbuki zindwendwe ngu- Mehdi
Izitshixo ziya kubonelelwa ngosuku lokuqala kwaye zibuyiselwe ngomhla wokugqibela. Ndiyakwazi ukufowunelwa ngefowuni, iMessage, Viber, (IZIQULATHO EZINGUNDOQO EFIHLEKILEYO) , okanye iMessage nanini na ifuneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Marsa